၂၀၁၀ မေလ၏အင်အားအကြီးဆုံးစမတ်ဖုန်း ၁၀ လုံးကို AnTuTu | Androidsis
ထုံးစံအတိုင်း AnTuTu သည်များသောအားဖြင့်လစဉ်အစီရင်ခံစာသို့မဟုတ်စျေးကွက်ရှိအင်အားအကောင်းဆုံးဆိပ်ကမ်းများ၏စာရင်းကိုတစ်လပြီးတစ်နှစ်ပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ဤအခွင့်အလမ်းအသစ်တွင်သင့်အားမေလလကိုသင့်အားပြသသည်။ ကြည့်ကြရအောင်!
ဤစာရင်းကိုမကြာသေးမီကဖော်ပြခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့မီးမောင်းထိုးပြထားသည့်အတိုင်း၎င်းသည်ပြီးခဲ့သည့်မေလကပိုင်ဆိုင်ခဲ့သောကြောင့် AnTuTu သည်ဤလ၏နောက်အဆင့်တွင်ဇူလိုင်လတွင်တွေ့ရလိမ့်မည်။ ထိုအခါဤဖြစ်ကြသည် မေလ ၂၀၁၉ တွင်အင်အားအကြီးဆုံးစမတ်ဖုန်းများစမ်းသပ်မှုပလက်ဖောင်းအရ
AnTuTu မှမေလအတွက်အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသောစမတ်ဖုန်း ၁၀ ခုစာရင်း
စာရင်းထဲတွင်ကောင်းစွာအသေးစိတ်နိုင်ပါသည်, ဒါပေမယ့်တရုတ်၌တည်ရှိ၏ el Nubia နီကို Magic3နှင့် ZTE Axon 10 Pro သူတို့ကပထမ ဦး ဆုံးဖြစ်ကြသည်အသီးသီး ၄၆၉,၇၀၈ နှင့် ၄၆၉,၅၉၀ အသီးသီးရှိပြီး၎င်းတို့နှင့်ကိန်းဂဏန်းကွာခြားချက်သည်အလွန်ကြီးမားသည်။
တတိယ၊ စတုတ္ထနှင့်ပဉ္စမနေရာကိုသိမ်းပိုက်ထားသည် Xiaomi က Mi9Explorer ကို Edition ကိုအဆိုပါ Black ကငါးမန်း2နှင့် Xiaomi က Mi 9အဆင့် ၃ နေရာတွင် ၃၇၆၀၉၂၊ ၃၇၄,၇၃၆ နှင့် ၃၇၂,၄၂၂ မှတ်အသီးသီးဖြင့်အဆင့် ၅ နေရာကိုသတ်မှတ်သည်။ သတိပြုသင့်သည် ဖော်ပြခဲ့သော Mi9သည်နောက်ဆုံးအဆင့်၏ပထမရာထူးနှစ်ခုကိုရယူထားသည်.
နောက်ဆုံးတွင်ဇယား၏ဒုတိယတစ်ဝက်ကိုဖွဲ့စည်းထားသည် Meizu 16s (370,135), အ7Pro ကို OnePlus (368,834), အ Lenovo Z6 Pro (363,399), အ Samsung ရဲ့ Galaxy S10 ပို (၃၆၂,၄၅၀) နှင့် Galaxy S362,450 (၃၆၁,၃၉၄) သည်ခြောက်နေရာမှဒသမနေရာအတိုင်းပင်ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » ၂၀၁၀ မေလ၏အင်အားအကြီးဆုံးစမတ်ဖုန်း ၁၀ လုံးကို AnTuTu မှပြောကြားခဲ့သည်
Run, Conan, Run နှင့်များစွာသော Detective Conan Runner: Race to the Truth တွင်သူ၏ပွဲ ဦး ထွက်၌များစွာပါဝင်သည်
Huawei တွင်စာဖတ်ခြင်း mode ကိုမည်သို့ပြုပြင်ရမည်နည်း